अन्तमा उनी यता न उताको भइन… – Daily NpNews
विवेकशील साझाले खाता खोल्दै बारामा जित्यो वडाध्यक्ष
इटहरीमा श्री नारायण चौधरी सहित नेकपा एमालेको प्यानलै विजयी
कठै ! आफ्नै घरमा थुनिएर बाच्नु परेकी नानीको कथा,आ गो लागेर शरीर यस्तोसम्म भयो (भिडियो हेर्नुस्)
कठै ! बुबाआमा म रेर गए,भारतमा बसबाटै भाई यसरी ह राए,एउटी चेलीको निकै दु ख लाग्दो कथा (भिडियो हेर्नुस्)
भरतपुरमा अत्याधिक मतले रेनु दाहाल अगाडि
काठमाडौंमा ६ हजार बढी मतले बालेनको अग्रता, ८ वडाको गणनामा बालेनले कहाँ कति मत पाए ?
धनकुटा नगरपालिकामा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई १४ मतले हराउँदै एमालेको जित
चमत्कार गर्छु भन्ने स्थापितलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउनु नेतृत्वको भुल भयोः योगेश भट्टराई
प्रचण्डको क्षेत्र माडीको मेयरमा एमाले विजयी
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/अन्तमा उनी यता न उताको भइन…
अन्तमा उनी यता न उताको भइन…
4 mins अघि 132minutes read
मङ्गलबार, बैशाख २१, २०७८ मा प्रकाशित
सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारी, बालविवाहका साथै घरेलु हिंसा पनि एक प्रमुख कारण हो तर वैदेशिक रोजगारीका कारण बढी सम्बन्धविच्छेद भएको देखिन्छ। यस्तै आफ्नो परिवारलाई बुझेर बस्न नसक्दा धोका पाएपछी एक महिला एक युट्युव च्यानलमा रुदै सहयोग माग्न आएकी छिन ।
उनका श्रीमान् बैदेशिक रोजगारीमा छन् । श्रीमान् भएको समयमा परपुरुष संग उनको माया प्रेम बस्यो र उनले २ बच्चालाई छोडेर त्यही पुरुष संग भागिन । अन्तिममा १ हप्ता पछि बिश्वास गरेर गएको ब्यक्तिले पनि धोका दियो । अन्तमा उनी यता न उताको भइन । घर परिवार कसैले वास्ता गर्न छोडेपछी उनी रुदै एक युट्युव च्यानलमा रुदै सहयोग माग्न आईन । यो भिडियो फाष्ट अनलाईन युट्युव च्यानलमा राखिएको छ । तल हेरौ सोही भिडियो ।
भाद्र ३१, २०७८ बिहिबार 22
हेर्नुहोस् विबाहपछि निकै खुशी छिन् सुन्दरी आशा, विबाहपछि पहिलो पटक अन्तरवार्तामा पति पत्नि एकसथा आएको भिडियो बन्यो भाइरल, हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौ । आफ्ना सन्तानका लागि आमाले जुनसुकै अवस्थामा पनि जे पनि गर्न सक्छिन् । अहिले विश्व महामारीको चपेटामा परेको छ । लाखौं आमाहरुलाई यो महामारीले शि का र बनाएको छ । तर हात खुट्टा चल्दा सम्म र जिवनको अन्तिम अवस्था सम्म पनि आमाको मायामा भने सन्तान प्रति कुनै कमि हुँदैन । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
यो पनि पढ्नुहोस् , अमेरिकी सरकारले नेपाललाई कोरोना भाइरससँग जुध्नका लागि विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ । विदेश मन्त्री एन्थोनी व्लिकेनले हालसालै नेपाललाई सहयोग गरिएको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा अझ सहयोग बढाउने जानकारी उच्च अधिकारीहरुले सिनेटको कमिटिमा समेत दिनुभएको छ । वहुराष्ट्रिय देशहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने खोप आयोजना कोभ्याक्सको लागि नेपाल पनि लाभान्वित देश हो । यो प्रक्रियामा रहेको छ भने नेपालले अमेरिकाबाट खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि वढाइरहेको छ ।
गाउबाट युवाहरु बिदेशिन थाले पछी यो बहिनीले यसरि हलो जोत्दै ! हेर्नुहोस भिडियो
कन्चनको ला`स माथि पुलिसको यस्तो ज्याजति कुर्नपनि दिएनन् हेर्नुस् (भिडियो हेर्नुस्)
मन्त्री साहको गाडीले यसरी हु’त्याएको थियो पैदल यात्रीलाई, घाइते छो’डेर भा’गेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रीले दिए यस्तो प्रतिकृया (दुर्घटनाको भिडियो हेर्नुस्)